ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က မော်လမြိုင်ကို ခဏခဏရောက်တယ်၊ မြို့မဟုတ်ပါဘူး၊တောရွာလေးပါ ၊ တောရောက်တော့ ရောက်သည့်အားလျှော်စွာပေါ့ ၊ ဟိုဟာလုပ်ဒါလုပ် သစ်ပင် တတ် ချောင်း ချို ချောင်း ကြား မြောင်းကျိုမြောင်းကြား ဂဏာန်းနှိုက် ပုဇွန်နှိုက် တောတတ်၊ အားရတယ်မရှိပါဘူး၊ တခါတရံကြတော့ ၊ ပွဲတွေဘာတွေ ကတဲ့ရာသီနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါ ရှိတယ်၊ ကျွန်တော် ၇နှစ်သား ကမှတ်ပါတယ်၊ အဲဒီဒေသမှာ ပွဲကတာ ပွဲနာမည်က ပြည်သူ့စိန်ခဲ လားဘဲ ကလိုက်တဲ့မင်းသား ၊ ကျွန်တော် တို့ကလဲ ဘမျိုး ဘိုးတူဗျ ပွဲအင်မတန်ကြိုက်တယ်၊ ကတာခုန်တာ တီးတာမှုတ်တာ အကုန်ဝါသနာပါတယ်၊ ၇နှစ်သား အရွယ်ဆိုတာ ပွဲခင်းထဲရောက်တာနဲ့ အိပ်ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန် တော်က အိပ်ကိုမအိပ်ဖူး ၊ အပျိုတော်ထွက် တာကနေ စလိုက်တာ ၊ အော်ပဒါ၊ မြန်မာသံစဉ်၊ စတိက် ရှိုး ၊ ပြဇာတ်၊ နှစ်ပါးသွား ၊နောက်ပိုင်း အိုး မိုးလင်း ထိဆိုပါစို့ဗျာ။
ကျွန်တော့်တို့ ကပွဲကြည့်မှာဆိုတော့ သူကြီးက ဖျာနေရာတို့ဘာတို့ စီစဉ်ပေးထားရတယ်၊ ကျွန် တော်တို့ ဘေးဖျာတချပ်ကျော်က လူတွေမကဘဲ ခွေးတစ်ကောင်ပါ ပွဲထိုင်ကြည့်နေတာကို တွေ့ တယ်ဗျ၊ ကျွန်တော်ကလဲ ဒီခွေးကို ပွဲကြိုက်တဲ့ခွေးဘဲ မှတ်တာဘဲ၊ နောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဒီခွေးက ကိစ္စရှိလို့ ပွဲခင်းထဲကို တကူးတက ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက အစာရေစာ ပေးပြီး အချိုသက်ခေါ် ထားတာ၊ တညလုံးဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူး၊ နှစ်ပါးသွားထွက်တော့ မင်းသားစိန်ခဲနဲ့ မင်းသမီးနှစ် ပါးလည်း သွားရော ခုနက ကျွန်တော်တို့ ဖျာတချပ်ကျော်က ၀ှီးကနဲ အသံကြီးထွက်ပြီး ကိန်ကိန် ဆိုတဲ့အ သံပါကြား လိုက်ရတယ်၊ နောက်တော့ ဘေးကခွေးကို ဘယ်အမျိုးကောင်းသားက ခွေးကို ဝေဟင် မှာလေ ယာဉ်စီးစေပြီး ကနေတဲ့ ဇာတ်စင်ပေါ်ကို အလည်အပတ် လွှတ်လိုက် သလဲမဆို တတ်ဘူး၊ အိုး ပြေးသူပြေး လွှားသူလွှား အော်ကြ ဟစ်ကြ နဲ့ ပွဲပျက်တယ်ဆိုပါစို့။
မိုးလင်းမှ အကြောင်းစုံ မေးကြည့်တော့ မင်းသားစိန်ဂဲ ဇာတ်ထဲက မင်းသမီးနဲ့ ရွာထဲက ကာလသားတွေနဲ့က တော်တော်လေပေးဖြောင့်ဆိုဘဲ၊ ကာလသားတွေနဲ့ လေပေးဖြောင့်တဲ့ မင်းသမီးကို ညောင်နာနာနဲ့ မင်းသားစိန်ခဲက တညလုံး အပျိုတော် ထွက်ပြီးကတည်းက မိုးလင်းလို့ နောက်ပိုင်းကတဲ့အထိ ဒီမင်းသမီးတလက်ထဲကို မင်းသားစိန်ခဲက တွဲကလို့ ၊ ရွာကကာလသားကြီးတွေက သူတို့အချစ်တော်မင်းသမီးကို အဲလို တညလုံး ၂ရက်ဆက်တိုက် ကရကောင်းလားဆိုပြီး ခွေးနဲ့ပြစ်တင်ပြီး ပွဲဖျက်တယ်လို့ သဲ့သဲ့ကြား ခဲ့တာဘဲ၊ အဲဒီအကြောင်းကို ထိုင်းမှာကျောင်းတတ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြတော့ တော်တော်လေး ရီကြတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မှတ်ချက်ပေးတယ် ယဉ်ကျေးမှု့ သိပ်မထွန်းကားလို့ ကွတဲ့၊ တို့အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဒီလိုဘဲဖြစ် နေဆဲ တဲ့။
အခုအောက်က သတင်းလေး ဖက်လိုက်တော့ ဇာတ်စင်ပေါ်ကို ခွေးပြစ်တင်တာကို အနှီသူငယ် ချင်းက ယဉ်ကျေးမှု့မထွန်းကား သည်ဟု ဆိုရကား၊ ကြက်ဥနှင့် ပေါက်လျှင် အဘယ်သို့နည်းဟု ပုစ္ဆာပြုလိုက် ချင်ပါဘိတောင်း။
စာရှု့သူအားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်း ၊ ငွေလမင်းတို့ ဆုမွန်တောင်းပါတယ်၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေခင်မျာ။
Australian charged over Justin Bieber egg throwing
SYDNEY: An Australian teenager was charged Thursday with breaking into the roof ofaconcert arena so he could throw eggs at Canadian pop sensation Justin Bieber.
The 17-year-old heartthrob, touring Australia, has been mobbed by screaming girls at sold-out shows, but had eggs thrown at him when performing his first single "One Time" ataconcert in Sydney on Friday.
None hit him and he finished singing the song before takingabreak so the stage could be cleaned up.
Australian Associated Press saida17-year-old Sydney resident was arrested at his home early Thursday and charged with breaking and entering, trespass and malicious damage following complaints from Acer Arena.
He was bailed to appear atachildren's court on June 2.
Posted by ငွေလမင်း at 12:37 AM 10 comments